Nhau - 2019 FIC China Yepasi Pose Chikafu Chekuwedzera uye Ingredients Exhibition
Musi waMarch 18-20, 2019 FIC China International Chikafu chekuwedzera uye Ingredients Exhibition yakaitirwa muShanghai, China. Global Ocean yakapinda chiratidziro.
Sehunyanzvi hwekugadzira mahydrocolloid muChina ane makore anodarika makumi maviri, Global Ocean inovimba nehunyanzvi hwekugadzirisa michina uye hunyanzvi hwekuburitsa hunyowani kugadzira zvigadzirwa zvese zvine mhando yepamusoro; zvigadzirwa zvedu zvikuru nderekudya giredhi agar, bacteriological agar, pakarepo soluble agar, carrageenan, agaro-oligosaccharide uye yavo michina zvigadzirwa, iyo yegore rose yekugona kugona inogona kusvika kumatoni mazana matatu. Zvigadzirwa zvedu zvakabvumidzwa neIO, HALAL uye KOSHER, zvakare zvinokwanisa kusangana neChina yenyika zviyero uye EU zviyero, uye zvakatengeswa muChina zvese uye zvakatumirwa kuSoutheast Asia, European uye American matunhu, nezvimwe.
Nzvimbo: Shanghai, China
Nguva: 18 - 20 Kurume, 2019
Dumba Nha. 52F20/52G21
Kudya Zvinongedzo China chiitiko chakasimba uye chakabatana chezvekuwedzera zvekudya uye indasitiri yezvigadzirwa muAsia. Pave nemakore anopfuura makumi maviri nematanhatu chiitiko ichi chakarongeka gore rega muChina Makambani anotungamira eindasitiri anotora chikamu pachiitiko ichi, achikwezva makumi ezviuru zvevashanyi vane hunyanzvi. Gore rega rega, huwandu hwevatori vechikamu hunowedzera. FIC 2019 yakarongerwa kubva "18 Kurume kusvika 20 Kurume, 2019", kuNational Exhibition uye Convention Center (Shanghai), China. Kunze kwezvazvino zvigadzirwa uye sevhisi yekuratidzira, vashanyi pamwe nevaratidziri vanogona kutora chikamu munhevedzano yehurukuro, technical seminar, summit forum uye academician foramu. Mune zviitiko izvi zvinosimudzira ruzivo, vatori vechikamu vanogona kuwana mufananidzo wakajeka weyekuvandudza indasitiri yezvikafu, kufambira mberi, mamiriro azvino, hunyanzvi, mashandisirwo ezvekudya, mirau uye zviyero, uye kusimudzira kwekuwedzera kwezvikafu.
Vaviri, vanotengesa uye vatengi kubva kumisika yepamba neyekunze kwenyika vanogadzirira kuona saga yezvigadzirwa zvitsva uye tekinoroji kutanga zviitiko, uye nhevedzano yemisangano nemaforamu, zvausati wamboita.